UN: Falastiin oo markale Mooshin horgeenaysa Golaha Amaanka
Home Somali News UN: Falastiin oo markale Mooshin horgeenaysa Golaha Amaanka
Dowlada Falastiin ayaa dooneysa inay markale golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay horgeyso Mooshin ka dhan ah Isra’iil xili ay sii xumaaneyso xiriirka ka dhaxeeya Maraykanka iyo Isra’iil.
Safiirka Falastiin u fadhiya Qaramada Midoobay Amb.Masuud ayaa sheegay in ay doonayaan in ay tijaabiyaan in xiligan Golaha Amaanka uu diyaar u yahay inay xuquuq dheeraad ah siiyaan Dowlada Falastiin.
Bishii Janaayo ee sanadkan ayey Falastiiniyiinta mooshin kan lamid ah horgeeyeen Qaramada Midoobay xiligaasi oo ay Falastiiniyiinta heleen 8 cod oo kaliya, xili looga baahnaa mooshinkaas inay ugu yaraan u codeeyaan 9 wadan ee kamid ah 15ka Golaha Amaanka.
Maraykanka ayaa xiligaasi codkiisa VETO aanan u adeegsan mooshinkaasi, balse si hoose uga shaqeeyey in dalalka qaarkooda aysan codkooda siin mooshinka Falastiin keentay, waxaana kamid ahaa dalalka codkooda lagu tashanayey Nigeria oo markii danbe ka aamustay codbixinta.
Dalka Nigeria ayaa xiligan doorashadii ka dhacday uu ku guuleystay hogaamiyihii Mucaaridka Muhamadu Buhari.
Dhinaca kale xukuumada Barack Obama iyo Isra’iil ayaan xiriirkooda hada uusan fiicneyn.
Madaxweynaha Maraykanka Obama ayaa sheegay in Maraykanka taageeradii siyaasadeed ee uu siinayey Isra’iil uu wax ka bedali doono hadii Hogaamiyaha Isra’iil Benjamin Netanyahu uu sii wado qorshihiisa uu ku horjoogsanayo dowlad gaar ah oo ay Falastiiniyiinta yeeshaan.
Walow ay isbedaladan xiligan jiraan ayaan hadana weli lagu kalsoonaan Karin in mooshinka Falastiiniyiinta ay cod buuxa ka helaan Golaha Amaanka.
Somaliland: Maamulka Puntland Oo Dawooyin Iyo Qalab Caafimaad Soo Gaadhsiyey Xukuumadda Somaliland
Somaliland: Sheekh Aadan Siiro Oo Xukuumadda Talada Haysa Ku Tilmaamay Mid Umaddii Qancin Kari La’ Oo Ku Mashquulsan Maxaa La Yidhi, Dalkiina Jaho Wareer Galisay